Ciyaartoyga Dunida Ugu Da'da Weyn Oo Kulankiisii Ugu Horreeyey Saftay Muddo Laba Sannadood Ah - Cadalool.com
Ciyaartoyga Dunida Ugu Da’da Weyn Oo Kulankiisii Ugu Horreeyey Saftay Muddo Laba Sannadood Ah
Ciyaartouyga dunida ugu da’da weyn ayaa garoomada kusoo laabtay usbuucan, waxaanu saftay ciyaartiisii ugu horreysay oo lagu soo bilaabay safka koowaad muddo laba sannadood ah.
Kazuyoshi Miura oo lagu naanayso ‘King Kazu’ waa 52 jir u dhashay waddanka Japan, waxaanu garoomada ku jiraa 43 sannadood oo uu soo maray marxalado kala duwan, laakiin waxa uu hadda ka tirsan yahay Yokohama FC.
Yokohama FC oo ka ciyaarta heerka labaad ee dalka Japan, waxay Sabtidii garaacday FC Gifu, waxaana ka sokow guusheeda garab socday rikoodh kale oo ahaa in laacibka khadka dhexe ee King Kazu uu kulankiisii ugu horreeyey u saftay muddo laba sannadood ah.
54 daqiiqadood oo uu garoonka ku jiray kaddib, waa la beddelay, balse markii uu garsooruhu afuufay siidhiga dhamaadka ciyaarta, waxa uu kala qayb qaatay damaashaadkii guusha oo ahayd 2-0.
Miura waxa uu ciyaaraha ka bilaabay kooxda Santos ee ka dhisan waddanka Brazil sannadkii 1986kii, waxaanu dalkiisa Japan kusoo laabtay sannadkii 1990-kii isaga oo ku biiray kooxda Verdy Kawasaki. Kaddib dibedda ayuu uga baxay dalkiisa, waxaanu usoo ciyaaray kooxo dhawr ah oo ay ka mid ahaayeen Genoa iyo Dinamo Zagreb.
Sannadkii 2005 ayuu yimid kooxda uu hadda u ciyaaro ee Yokohama, waxaanu u saftay 270 ciyaarood isaga oo u dhaliyey 27 gool.
Laacibkan ay da’du sheekada uun ku tahay ee wali wacdaraha ka dhigaya garoomada, lama oga xilliga uu ka fadhiisan doono ciyaaraha, balse dad badan ayaa uu ku dayasho u yahay, halka shirkado badan ay lacago badan ku siiyaan inuu u xayaysiiyo alaabtooda amaba uu sawirkiisu kasoo muuqdo waxsoo-saarkooda.